Fokon' i Jôsefa - Wikipedia
Fokon' i Jôsefa
(tonga teto avy amin'ny Fokon'i Josefa)
Ny fokon' i Jôsefa dia iray amin' ireo fokon' i Israely. Nizara ho foko roa izy dia ny fokon' i Efraima sy ny fokon' i Manase.
1 I Jôsefa
2 Fokon'i Efraima
3 Fokon' i Manase
I Jôsefa (hebreo: יוֹסֵף‬ / Iosef) dia zanak' i Jakoba sy i Rahely izy. Namidin' ireo rahalahiny izay nialona azy ho andevo izy nefa lasa manampahefana tany Egipta taty aoriana. Nantsoiny honina any Egipta ireo fianakaviany. Taorian' ny nahafatesany sy ilay Farao natoky azy no nanombohan' ny fanandevozan' ny Egiptiana ny Zanak' i Israely. I Manase sy i Efraima no zanany lahy izay samy nana ny maha izy azy satria nanana foko manokana avy.
Isan' ny Fanjakan' i Samaria ny fokon' i Efraima tamin' ny fisarahan' ny Zanak' i Israely ho fanjakana roa. Tamin' ny ady nifanaovan' ny fokon' i Efraima tamin' ny sisan' ny fokon' i Israely dia ampy hahafantarana ny Efraimita ny tsy fahaizany manonona ny hoe shibboleth izay tononiny hoe sibbolet.
Fokon' i ManaseHanova
Ny fokon' i Manase dia vakiny iray amin' ny fokon' i Jôsefa. Indraindray ny Baiboly dia miresaka ny amin' ny antsasa-pokon' i Manase miaraka amin' ny fokon' i Robena sy ny fokon' i Gada, satria ireo foko roa sy sasany ireo dia nandray anjara tamin' ny fakana ny tany Kanaana ka nipetraka teny ampita atsinanan' i Jordana fa ny fokon' i Israely sisa rehetra kosa, isan' izany ny antsasany faharoa amin' ny fokon' i Manase, dia napetrak' i Jôsoa (na Jôsoe) teo amin' ny Tanin' i Israely.
Ny fokon' i Jôsefa dia isan' ny foko folo very taorian' ny faharavan' ny Fanjakan' i Samaria.
Fokon' i Israely: Robena - Simeona - Levy - Jodà - Isakara - Zabolona - Dana - Naftaly - Gada - Asera - Jôsefa (Manase sy Efraima) - Benjamina.
Josefa zanak'i Jakoba
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fokon%27_i_Jôsefa&oldid=1037428"
Dernière modification le 5 Septambra 2021, à 16:18
Voaova farany tamin'ny 5 Septambra 2021 amin'ny 16:18 ity pejy ity.